ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » the Dog Walker က
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 21 2020 | 10 မိဖတ်ပြီးသား
Nina ဒံယေလကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြရသည်. သူမသည်သူတို့ရဲ့ဦးချိုအားဖြင့်နွားထီးကိုယူသွားပြီဟု, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသင့်လျော်စွာ, သူတို့ရဲ့ leashes ခြင်းအားဖြင့်ခွေး, နှင့်သူ၏ပြီးပြည့်စုံသောအာရုံစိုက်မှုကိုရ, သူမကသူမကိုယ်သူတစ်ဦးစုစုပေါင်းမိုက်သောသူ၏လုပ်ခဲ့လျှင်တောင်မှ, သောခဲ့သည်, အများဆုံးဆက်ဆက်, မလွှဲမရှောင်.
ဒါကြောင့်သူမတစ်ဦးအထူးခွေးလမ်းလျှောက်အဖြစ်အပျက်စီစဉ်ထား. ယနေ့တွင်, အစားအသူမကအများအားဖြင့် ပြု. လမ်းကိုတက်ဖော်စပ်၏, လူမျိုးစုံ၏ခွေးနှင့်အတူ, သူမအနည်းငယ်ဖြူ Yuppie-ခွေးကို Fest ကျင်းပရန်စီစဉ်. ဒါဟာသူမရဲ့အချိန်ဇယားအချို့ juggling နှင့်အဘိဓါန် Suki နှင့်အတူအချို့သော finagling ကိုယူ, သူမသည်အဘယ်သူ၏အမှုသည်များအ cutesy ၏ခွေးဖြစ်ပုံရသည်ခွေးပြေးသိထားတယ်အခြားခွေးကို Walker, နည်းနည်းအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအဘယ်သူသူမကတစ်ဦးသည်ပြီးခဲ့သည့်မိနစ် whim အပေါ်ဟာဝိုင်ယီမှ သွား. မိမိအတွက်ဖြည့်စွက်ရန် Nina ဟုမေးမြန်းသောအခါထိုကာလမှ Nina အကြွေး.
သူတို့ပုံမှန်မဟုတ်သောအမှတ်အသားများအဖြစ်ရှိခဲ့မဟုတ်လျှင် Nina အဲဒီခွေးအကြားခြားနားချက်ကိုပြောပြဘယ်တော့မှမနိုင်, Stella ရဲ့ပျောက်ဆုံးဘယ်ဖက်နားအတူ, သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်တင်ပါးဆုံရိုးပေါ်တွင်သို့မဟုတ် Jedi ရဲ့ပြောင် patch ကို. သူမ၏ရန်, ထိုသူတို့သည်ရှိသမျှတို့ကိုအနည်းငယ်ဖြူခွေးခဲ့ကြသည်, Cockapoos မှလွဲ., သောကယ့်ကိုချစ်စရာ, smart ခဲ့ကြသည်, သင်မူကား, mutts ထံမှနောက်ထပ်ဘာများမျှော်လင့်ထားပါဘူး, Cockapoos ကယ့်ကိုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအရာဖြစ်ပါသည်. စင်ကြယ်သောဥစ္စာအနည်းငယ်ဖြူခွေးချစ်စရာဆက်စပ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သူတို့ကိုစဉ်းစားသောသူ Idiots ကပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုခံရလေ့ရပ်ကြီး, သူတို့သေးငယ်သောင်နှင့်သင်တစ်ဦးလေယာဉ်ပျံပေါ်တွင်သို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်တဆိုင်သူတို့ကိုယူနိုင်သောကြောင့်သာ. (သူမသည်မပေးခဲ့ကြပါဘူး, သို့သော်, က hypo-allergenic ကြောင့်တဦးတည်းပိုင်ဆိုင်သောသောသူတို့အားတရားစီရင်တော်. ဒါဟာဆေးပညာအကြောင်းဖြစ်ခဲ့, ထိုကဲ့သို့သောခွေးကိုပိုင်ဆိုင်မှသာလက်ခံနိုင်အကြောင်းပြချက်။)
သို့သော်အနည်းငယ်ဖြူခွေးမဆိုပိုင်ရှင်ကခြစ်သင်သည်သူတို့၏ဖောက်အထူးထူးခြားတဲ့ဖြစ်သည်ကိုယုံကြည်သောသူတစ်ဦးစိတ်မူသောမိဘတွေ့ပါလိမ့်မယ်, နှင့်ကွာခြားချက်ဖြင့်သင်တို့ကိုဘွားမြင်လေ၏, အသေးစိတ်အတွက်, တစ်ဦး Bichon နှင့်တစ်ဦးအကြားအဘိဓါန် Maltese, သောအကြောင်း, ဟုတ်ပါတယ်, Nina တစ်ဦး Shit ပေးနိုင်.
ဒါပေမဲ့, အမြင်အာရုံစကားပြောခြင်း, တစ်ဦးထုပ်အဖြစ်, သူတို့တစ်တွေရှေ့တော်၌နေကြ၏. သူမသည်ရေလှောင်ကန်ဖ​​ို့ကိုသူတို့သိမ်းယူခဲ့, သူတို့ဒံယေလသို့ပြေးချင်ပါတယ်လို့ပဲမျှော်လင့်. သူမသည်သူတိုင်းနံနက်တိုင်းသို့ပြေး လာ. သိသူသည် သွား. ရုံလမ်း. ဒီနေ့မနက်ကစည်ကားခဲ့သည်, ပင်သူမကခွေးအတွက်အသုံးပြုကြောင်းမြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်. လူတိုင်းကသူ့ကိုမှာရှာဖွေနေခဲ့သည်, ပြုံးရွှင်နေသော, အမှတ်, ထို adore မျက်မှောက်မှာ. သို့သော်ဘုရားသခင်ကသူမခြံစည်းရိုးမှာရွရွပြေးလမ်းကြောင်းသုံးဆီးတားကြ. ဒါကြောင့်ခွေးငှါလာသောအခါ Joggers ယုတ် motherfuckers ခဲ့ကြသည်, ကလေး strollers, Walker သို့မဟုတ်ပင်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်, သူမသည်ယနေ့နံနက်ကနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်မှစွမ်းအင်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, အထူးသဖြင့်သူမ၏ဦးသေဆုံးပြီးဘူးသောထိုချစ်စရာအသစ်ညှပ်ဖိနပ်ကိုဝတ်ဆင်.
သူတို့ကရေလှောင်ကန်၏တောင်ဘက်အစွန်အဖျားမှာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအနီးသို့အဖြစ်, တစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခွေးမှောင်မိုက်ထဲကအပင်ပေါက်သော်လည်း. ဒါဟာစစ်နိုင်ခဲ့. ဟာသေပြီ, Nina ထင်, သူဖြောင့်သည်သူ့အဘို့ကိုနယ်နိမိတ်အဖြစ်, ဒီနေရာမှာသူလာ. အကြောင်းမူကားစစ်နိုင်အရပ်, ဒံယေလသည်ရှိ၏. ထိုမိန်းမ၏စိတ်နှလုံးသည်တရာ thumps တစ်စက္ကန့်ကိုရိုက်ပုတ်ရန်စတင်, နှင့်အလိုအလျောက်အပြုံးသူမရဲ့မျက်နှာပေါ်ကို၎င်း၏လမ်းကိုတွေ့ရှိ, သူမ၏လက်ကိုသူမ၏ဆံပင်အတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့ဖို့ချီ သွား. အဖြစ်, ပြီးတော့သူမ၏ရှပ်အင်္ကျီဖြိုမဖျက်, သူမမျက်နှာမှချွေးသုတ်.
ထို့နောက်သူသည်သူ့ကိုမြင်လျှင်. တစ်ဦး t-ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ဘောင်းဘီတိုထဲမှာ, ဆံပင်သူ့အိပ်ရာထဲကအလှိမ့်ခဲ့တူ, နားကြပ်နဲ့သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်၌ရှိတစ်ဦးက MP3 player နဲ့အတူရွရွပြေး, ဂီတအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူ့စိတ်. သူသည်ထိုမိန်းမကိုမြင်မပါဘဲသူမ၏မျက်နှာသို့ပြေးလေ၏.
ကိုယ်တော်ပြုတော်မူမှီတိုင်အောင်,. ပြီးနောက်, ပြုံးသူ၏မျက်နှာအနှံ့ထွက်ချိုးဖဲ့, သူ့မျက်စိ crinkle အောင်, သူ့ပါး dimple. သူမသည်လွဲချော်ဖို့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်. သူမသည်တကျိပ်တပါးသောဥစ္စာအနည်းငယ်ဖြူခွေးကဝိုင်းခဲ့, မျိုးကလူသယ်လေ့နှင့် coddle. သူမသည်မြောက်ကောင်းမွန်စုန်းသဏ္ဍန်, bichons အစား munchkins ကဝိုင်း. ထိုမိန်းမငယ်သည်မယ့်အစားသူမ၏ခါတိုင်းလိုဘောင်းဘီတို၏တစ်ဦးအလွန်တိုတောင်းသောအင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်အစားသူမ၏ဖိနပ်အစား t-shirt နှင့်ဘုရားသည်သူကပြောတယ်မသက်မသာခြေနင်းသူမ၏ခါတိုင်းလိုပြဲတက္ကသိုလ် flimsy peasanty အင်္ကျီတစ်မျိုးကိုခဲ့သည်.
သူကသူမ၏မျက်နှာသို့ခေါင်းနှစ်လုံး, ခဏမှာသူမဘယ်နေရာမှာမဆိုသွားမခံသောကြောင့်. သူများသည်ခွေးစာသားပတ်လည်စက်ဝိုင်းပြေးကြ၏. ဒီတစ်ခါလည်းသူမကျရောက်င့် (သူမအနာတရရန်မျှော်လင့်ခဲ့သည်ကိုမခံဘဲ) သူကောက်ဖို့ရှိသည်င့် (ဒါပေမဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်).
“Nina ဟေ့။” နှင့်အလိုတော်အားဖြင့်ရှိလျှင်အဖြစ်, သူအလေးအနက်ဖြစ်လာ, လုနီးပါးတင်းမာ. သူမပိုကောင်းသိမထားရင်, သူမကသူဟောင်းလို့ထင်ခဲ့တယ်ဖြစ်မယ်. သူသူမသည်ရှိသည်မဖြစ်သင့်သောနေရာများ၌သူ၏တိုက်ခန်းတွင်ခဲ့သိခဲ့ပါ? သူကသူ့ထံချဉ်းကပ်ပြီးအဖြစ်, သူသည်မိမိအနားကြပ်ကိုချွတ်, သူတို့ကိုသူ၏လည်ပင်းတစ်ဝိုက်ဆွဲထားတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်. သူက MP3 ပလေယာပယ် Click တချက်နှိပ်လိုက်ရုံ.
“သင့်ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါများကဲ့သို့ပင်. သင်သည်အဘယ်ရှိသည်ပါဘူး, တကျိပ် bichon frieze?” ဒံယေလကိုမေးခဲ့တယ်. သူကပြုံးပြ, သူတတ်နိုင်သလောက်အဖြစ်သူမ၏အဖြစ်နီးစပ်တယ်အဖြစ်, ပတ်ဝန်းကျင်တပ်ဖွဲ့များပေးထားသော.
“ကျွန်မအထင်ကြီးင်. သို့သော်အမှန်တကယ်, ကျမဒီမှာတစ် bichon ရှိသည်, ဒီနေရာမှာဒီတစ်ခု, ကြယ်. အဲဒီ Zardoz င်, တစ်ဦး bichon / yorkie ရောစပ်, ကျောက်ပေါ်မှာ peeing ဟိုမှာ. ကျနော်နှစ်ခု chi-poos ရှိသည်, ဆမ်နှင့်-Dave, ညာဘက်ရှိငယ်ပန်းရောင်လေးနှင့်အတူ, ဟင်း, ထို cockapoo, ဂျက်ကီအို. နှင့် John F., နှစ်ဦးဝါဂွမ်း Tulears. လည်း, Annie, ထို Lhasa apso, ငရဲကနေခွေးကို. ဘာလဲသိလား? သူမအိမ်မှာင်သည့်အခါသူမသည် doggie နှီးကျီ. နောက်တာပါမ. ထိုသုံး Malteser? ဒါကြောင့်လာရီင်, ကောက်ကောက်နှင့်ကိုမိုး. တကျိပ်တပါးသော yuppie အားလုံးတတန်းအတွက်ခွေးတွေ။”
“သင်မည်သို့ပြောပြနိုင်? ဘယ်သူင်, ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါ့ထံသို့ရောနှောကြည့်ပါ။”
“သင်တို့အ doggist! ထိုအသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ësomeမဆိုare'Ö”
သူကရယ်ပါ, သူငုံ့ကြည့်အဖြစ်. သူမ၏ toenails တစ်ဦးမေ့မြောပန်းရောင်ခြယ်သနှင့်သူမ၏ခြေအနည်းငယ် gnarly နှင့်ခုံးသော်လည်းခဲ့သည်, သူမ biker-မိန်းကလေး-နှင့်အတူ-ခွေးသူမ၏ပုံမှန်အတိုင်းကြည့်ဖို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိမ်မွေ့နှင့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကြည့်ရှု. သူဟာပိုကောင်းကြိုက်တယ်သောကြည့်ရှုသေချာမဟုတ်ခဲ့.
Nina ဒါကြောင့်အံ့သြရကျေနပ်ခဲ့သည်, သူမကသူမကိုယ်သူအနိုင်နိုင်ဆံ့နိုင်. “သင်သည်သတိထားမိ. ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ–“
“အဘယ်သူမျှမတက္ကသိုလ်မှ t-shirt ဟာ။”
ဒါဟာအလုပ်လုပ်ခဲ့, Nina မိမိကိုယ်ကိုထင်. သူမသည်သူမ၏ leashes အပေါ်တစ်ဦးဆွဲခံစားခဲ့ရ. '' လူတိုင်းနေဖို့. ကိုယ့်တဦးတည်းနေထိုင်မိနစ်, ကျေးဇူးပြု။”
Nina နောက်ကျောကိုဒံယေလအားတက်ပြီးတော့သူမ၏ခြေချောင်းမှာငုံ့ကြည့်. “ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ဒါကြောင့်သင်တို့ပြု. ငါသည်အmeanÖ”
“ဒါပေမယ့်အဲဒီဖိနပ်ကို၌ကျင်လည်ကြရခက်အောင်ရှိတယ်။” သူကသူတို့ရဲ့ strappy ခြေနင်းတွင်သူမ၏ခြေရင်းမှာကြည့်ပြီးထို့နောက်သူမ၏ရှင်းလင်းသောခြေထောက်မှာထို့နောက်သူမ၏မျက်စိကိုသို့. သူမသည်သူ့ကိုမြင်မြင်ဘူး, သူက blushed.
“ကောင်းစွာ, ကျွန်မပိုကောင်းအဲဒီခွေးလှည့်လည်နှင့် home ရ။” သူမဦးရေစုစုပေါင်းကဒီကောင်တွေခဲ့သည်? အဘယ်ကြောင့်သူမရဲ့အလုပ်၏သူ့ကိုသတိပေးခဲ့? ဤဖြစ်ရပ်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်သူ့ကိုမသူမ၏အဖြစ်သူမ၏စဉ်းစားရန်ရခဲ့.
သူကခေါင်းငြိမ့်. “ငါအစည်းအဝေးရှိသည်. ဒါကြောင့်, ကျေးဇူးတင်စကား။”
“သေချာတာပေါ့, ငါ့အလုပ်ပါပဲ။” ငါစစ်နိုင်ကောက်ကြကုန်အံ့ငှါသင့်ကိုပေးဆောင်င့်.
ထိုအခါဒံယေလကပြောပါတယ်, “အဲဒီခွေးကလူကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကျွန်တော်င်. သူတို့ဟာချစ်စရာင်, ဒါပေမဲ့သူတို့ဆွဲယူကြဘူး. သူတို့ကအရုပ်ရှိခြင်းတွေလိုပဲ။”
“အင်း, ကောင်းစွာ, လူနေမကောင်းဖြစ်,” Nina ကပြောပါတယ်.
သူကတက်ဖြောင့်နှင့်သူမ၏ကြည့်ရှု. “သူတို့က,” ဟုသူကပြောသည်, သူ့မျက်စိကိုပိုမိုနီးကပ်စွာသူမ၏ကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်အဖြစ် squinted အဖြစ်. “သူတို့ကပြစ်မှား။”
သူမသည်အံ့သြတုန်လှုပ်စိတ်လှုပ်ရှားသိမ်းယူခဲ့သည်. “သူတို့ကသွားရောက်ကြည့်ရှု,” လို့သူကပြောပါတယ်, ကာကွယ်မှု.
“သူတို့က Snoop ။”
“Oh သူတို့ပြုကြ?” သူမသည်သူမ၏မျက်ခုံးထမြောက်စေ, မစ္စတာမှာသူ့ကိုစဉ်းစား. Chandler စသည့်, သူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသူမရဲ့နာမည်ကို၏.
“သူတို့ကအိပ်,” Nina ကပြောပါတယ်, အဘယ်ကြောင့်သူစဉ်းစား, ရှေ့နေတစ်, မစ္စစ်အားစုံစမ်းစစ်ဆေးလိမ့်မည်ဟု. ပထမဦးဆုံးဌာန၌ Chandler.
“သူတို့ကလူများရဲ့ privacy ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို။”
“တိကျစွာ,” Nina သဘောတူညီခဲ့.
သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီကတခြားချောင်းမြောင်းလျက်နေ၏. ခွေးဦးနှောက်အာရုံကြောလာပြီခဲ့သည်. Annie စစ်နိုင်ရဲ့တင်းပါး sniffing ခဲ့ပါသည်နှင့်ကိုမိုး Annie ရဲ့တင်းပါး sniffing ခဲ့ပေမယ်စစ်နိုင်ကတခြားလူတွေရဲ့တင်းပါး sniffing ကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားခဲ့. သူကပဲတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသွားဤသူငယ်ဖြူ ratdogs ကနေငရဲရချင်တယ်.
“သင်သည်ပိုကောင်းသွား,” Nina ကပြောပါတယ်. “sid လွန်းပျော်ရွှင်မကြည့်ပါဘူး။”
sid အံသွားသည်လည်းသည်းခံခြင်းနှင့်တင်ပြသည့်စိုက်ခဲ့, မိမိအ hackles တက်, တစ်ဦးပြန်ဝင်လာဖို့မှာသူ၏အမြီးသည်.
“သူကချောင်. ငါနှင့်အတူသွားလာ,” ဒံယေလကပြောပါတယ်. “စလာသည်။”
ဒါကြောင့်လဲသူတို့လှည့်လည်, ထိုရေလှောင်ကန်ပတ်လည်မှာအတူတကွတစ်ဒါဇင်ခွေးနှင့်အတူ, ဒံယေလသည်သူ၏အပြင်ဘက်လက်နှင့်အတူစစ်နိုင်ကိုင်ပြီး.
“ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ,” ဟုသူကပြောသည်. “အဘယ်ကြောင့်သင်ခွေးလမ်းလျှောက်ကြဘူး?”
“ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ? ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်? တစ်ဦးက စစ်မှန်သော အလုပ်? သောသင်တို့၌အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကို Is?”
သူကသူမ၏ defensivness လျစ်လျူရှု. “ကောင်းစွာ, သင်အမြဲခွေး Walker ပါပြီ?”
“အဘယ်ကြောင့်, ခွေး Walker ဖြစ်ခြင်းအမှားတစ်ခုခု?” အဘယ်ကြောင့်လူတိုင်းကခွေးကိုလမ်းလျှောက်သင်လုပ်ဆောင်နေတာခံရဖို့ဘာလိုချင်မှာပျက်ကွက်နေချိန်မှာသင်ပြုအဘယ်သို့သောအယူဆခဲ့ပါ.
“မလုပ်ပါနှင့်, ကျွန်တော်”မီတာ့စပ်စု. ကအဆင်ပြေမဖြစ်?”
“ကိုယ့်အကြောင်းကိုတနှစ်အဘို့. ဝမ်းနည်းပါတယ်. ကိုယ့်သူငယ်ချင်း, ရှင်းလင်းသော, L.A ဖို့သွားခဲ့ရတယ်. ကိုယာယီ, ဒါကြောင့်လဲသူမအတွက်လွှဲပြောင်းယူ, ကိုယာယီ.
“ဒါကြောင့်ယာယီမ, ယခုနှစ်အတွင်းကြာအလုပ်. သင်တို့ရှေ့မှာအဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါ?”
“ကျပန်းအိမ်. Copywriter ။”
“စွန့်လွှတ်မှအများကြီးမဟုတ်ခဲ့. ငါ့ mom, မှလွဲ.. သူ့ကိုငါဝါကြွားအခွင့်အရေးကိုလည်းယူသွား၏။”
သူနောက်တာပါသို့မဟုတ်မခံခဲ့ရလျှင်သူမသည်ထွက်ရှာတွေ့မှသူ့ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြရသည်. သူဟာခဲ့သည်. သူမသည်သူ့ကိုနောက်ကျောကပြုံးပြီး.
“အချို့ကိုသင်ကောင်းငွေရှာရမယ်. ငါသည်သင်တို့ကိုပေးဆောင်အရာကိုသုံးသပ်ခြင်း, နှင့်မည်မျှအားဖြင့်များပြား? သင်သည်ခွေးအများကြီးရရှိပါသည်, မှန်သော? ထိုအကအားလုံးကိုငွေသားရဲ့, မှန်သော?”
“အဘယ်သင့်အကြောင်း? သင်ကချော်င်–?” သူမသည်သူမကိုယ်သူကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်သိပ်နောက်ကျခဲ့.
သူ၏မျက်စိသည်ပါးလွှာသော slits ဖြစ်လာပြီးသူကပြုံးပြီး. “သင်ကဆိုနိုင်. ဒါဟာမကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမယ်. ငါ့နောက်သို့လိုက်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ: ရှေ့နေ. စလာသည်။”
“How'd သင်သိ?” မေးမြန်းတော်မူလျှင်, သော်လည်း, သူသိသည်မည်မျှကောင်းစွာ သိ..
“ကောင်းစွာ, တစ်ဦး, ကျွန်တော်, ့ထင်ကြေး. သင်သည်အရှေ့နေတစ်တူအောင်. sid ရှေ့နေတစ်ရှိသည်မယ်လို့ခွေးမျိုး. သင့်ရဲ့တိုက်ခန်းကို, ကောင်းစွာ, ငါမြင်ဖူးတယ်ဘာကိုမှ, ရှေ့နေတဦးအသက်ရှင်မည်ဖြစ်ကြောင်းအရပ်မျိုးတူလှပါတယ်။”
“သင့်ရဲ့ foyer ။”
“ရေချိုးခန်းထဲမှ foyer ကနေခန်းမဆောင်, Oh နှင့်သင်ရေချိုးခန်းထဲမှရရန်အားဖြင့်လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြရသည်ကိုအိပ်ခန်းထဲမှာ။”
သူမသည်သူ့ကိုရပ်တန့်ဖို့ခဲ့. သူ့ကိုလွှဲရန်. “အင်း, ကရေချိုးကန်ခဲ့, ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်သာ. သူတို့သည်သေ giveaways ခဲ့ကြသည်. သူတို့ကရှေ့နေ '' ဟုပြောသည်’ အားလုံးသူတို့အပေါ်မှာ။” သူမသည်နောက်တစ်ကြိမ်ယယ်. “ငါရေချိုးခန်းအကြောင်းမေ့လျော့ကြ၏။”
“လွယ်ပါတယ်. ငါ့ကိုမ,” သူပြုံးကဆိုသည်.
အခုတော့အရှေ့ဘက်၌တက်နှင့်အနောက်မျက်နှာမှအလှည့်ခါနီးပြီ, အိမ်မိမိတို့သွားရာလမ်းပေါ်တွင်ပျော်ရွှင်စွာခွေး, Nina နှင့်ဒံယေလတစ်ဦးလမ်းလျှောက် groove သို့ပြိုလဲခဲ့. သူတို့ထဲကတစ်ခုခုကိုစကားပြောခင်အချိန်ကမိနစ်ခဲ့သည်.
“အကြှနျုပျသညျ trombone,” ဒံယေလကပြောပါတယ်.
“ငါ့ trombone, ငါကလည်း။”
Nina ရဲ့သူမ၏စိတ်နှလုံးသည်, jazz quartet တစ်စည်ကိုရိုက်နှက်တူခံစားနိုင်. “ခင်ဗျား, တစ်ဦး, trombone ကစား?”
သူကတစ်မိနစ်အတွက်သူမ၏ကြည့်ရှု, အဘယ်အရာကိုမျှပြောပါတယ်. ထိုအခါ, နာရီကဲ့သို့ထင်မှတ်လိုက်, မေးမြန်းတော်မူလျှင်, “သင်သည်, jazz နဲ့တူ?” ဒံယေလကိုမေးခဲ့တယ်.
“သေချာတာပေါ့, ဟုတ်ကဲ့. ကျွန်တော် .... လို့ထင်ပါတယ်။” သူမ၏နှလုံးဘေ့စဖို့ကျော့ကွင်းထဲကသွားကြောင်း. သူကဖြစ်စေသူမ၏ထွက်မေးရန်သွားသို့မဟုတ်သူမ၏ထွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်.
“သင်တို့အ Hampton တွန်းနား ထောင်. ငါနှင့်အတူလိုက်ချင်ပါတယ်ထင်? သူကတပ်ဦးမှာယ်နှင့်တစ်ဦးခိုင် trombone အခန်းကဏ္ဍ. သင်သည် trombone တူ, သင် ... ဘူးလား။”
သူကမေးခွန်းအဖြစ်ကမတောင်းခဲ့, ဒါကြောင့်သူမပြန်မဖြေပါဘူး. “ကျွန်မကြယ်ပွင့်, jazz trombonists ရှိခဲ့သည်မသိခဲ့ပါဘူး။”
“ကြယ်တို့၏ trombonists ရှိပါတယ်ပေမယ်, အဘယ်သူမျှမကြယ်များ. တံပိုး, saxes, ဟုတ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် trombones ၎င်းတို့၏ကြောင့်ဆည်းပူးဖူးဘူး. အဆိုပါ trombone ကိုသတိမမူမိချိုကိုဖြစ်. သေချာတာပေါ့, ပြင်သစ်ဦးချိုဂန္ထဝင်ဂီတရှိသည်, tubas ချည်အနှောင်ကိုချီတက်ခဲ့ကြ, နှင့်သင်တန်း, တံပိုး, saxes ၏နေရာတိုင်းတွင်, လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်. သို့သော် trombone? ဒါဟာမေ့လျော့နေဦးချိုင့်, တိတ်ဆိတ်သော, အသက်ဝိညာဉ်, တံပိုးမှုတ်ညာဏအစ်ကို။”
မိန်းမသည်သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့် mesmerized ခဲ့သည်.
“ဒါကြောင့်, သင်တဦးတည်းကိုကြားသွားချင်တဲ့? တကယ်တော့ငါးခု? Hampton ရဲ့ trombone quintet အတူတကွသွင်းထား. ဒါဟာတစ်ခုခုဖြစ်မသွားမယ့်. သင်တို့ကိုငါဒီလိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကတည်းကထင်, ကောင်းစွာ, သင်ရောက်ချင်တဲ့ပေလိမ့်မည်။”
“ကောင်းစွာ, ဟုတ်တယ်, သေချာ, ဒါပေမဲ့, ငါတကယ်မဆိုလိုhaveÖ”
“ယနေ့ည?” သူကသူ့မိနစ်အဘို့အထင်နှင့်အရာတစ်ခုခုကိုအောကျမေ့. သူမသည်သူမ၏တင်ပါးဆုံရိုးပေါ်သူမကိုယ်သူ hit. “aw, မလုပ်ပါနှင့်, ကျနော်ဒီညမလို့ရတယ်။” ကို Claire ကျော်လျက်ကြွလာခဲ့ပါသည်နှင့်သူမတစ်ဦးယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်မိတ်ဆွေတစ်ဦးကို cancel ဘယ်တော့မှမဖွင့်. တောင်မှဒီကောင်လေး.
“okay, ဘယ်လိုမနက်ဖြန်အကြောင်း? သူတို့ကတစ်ဦးရက်အနည်းငယ်ပတ်လည်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်. ပထမဦးဆုံးအစုကိုးမှာဖြစ်ပါတယ်. ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးကိုစားတယ်။”
ဘုရားသခင့ Oh. jeez Oh. ဟုတ်ကဲ့ Oh! နေရောင်ကိုရုံ treetops ကျော်ထမြောက်တော်မူခဲ့ကြောင်းနှင့်သူမ၏မျက်နှာအပေါ်နွေးထွေးမှုခံစားရနိုင်. ခွေးပျော်ရွှင်စွာကိုလတ်ဆတ်သောနံနက်လေထု sniffing နှင့်သူမပိုကောင်းမသိခဲ့ပါလျှင်ခဲ့သည်, ဤအသက်ရှိ၏! ဒါဟာပြည့်စုံသောပြည့်စုံသောနံနက်ခဲ့သည်. ကြည့်ရှု! မြင်! ဘဝအသက်တာတစ်ဦးကိုချက်ချင်းလက်ငင်းတွင်လှည့်.
“တစ်ဦး '' ကောင်းစွာခြင်းဖြစ်သည်, ဟုတ်ကဲ့ ''?”
“ကောင်းစွာ, အဆင်ပြေ,” သူမပီပြင်စွာပြန်ပြောသည်.
“ငါသည်တဟုတ်ကဲ့များအတွက်ထိုငွေကို ယူ. လိမ့်မယ်. ငါသည်သင်တို့ကိုကောက်ချီရကြမည်?”
သူမသည်အစာရှောင်ခြင်းစဉ်းစားခဲ့ကြရသည်, ဒါကြောင့်ပုံမှန်ထက် '' ရက်စွဲမှရှောင်ရှားရန်လိုသော’ နမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ဒါကြောင့်ပြောဆိုရန်, သေမင်း၏. “အဲဒီမှာတွေ့ရတာနိုင်သလား?”
“သေချာတာပေါ့, ထိုသို့ရှိရာအရပ်၌သင်တို့သိ? သတ္တမနှင့်ဒသမ, မြောက်ဘက်၌, အလွန်သေးငယ်သောရာအရပ်ကို. ခုနစ်ခု-သုံးဆယ်အဆင်ပြေ?”
“သတ္တမနှင့်ဒသမ?” သူမသည်ရွာကို သိ. မမှာအရှက်နှင့်အတူ flushed.
“သတ္တမရိပ်သာလမ်းနှင့်ဒသမ Street, ။” သူကပြုံးပြ.
သူမသည်သူ့ကိုပြသနိုင်ဖို့ခေါင်းငြိမ့်သူမကအောက်ပါခဲ့သည်. “ခုနစ်ခု-သုံးဆယ်မှာ,” သူမကထပ်ခါတလဲလဲ, တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားအတွက်, ကြောက်မက်ဘွယ်သော, လွှမ်း stupor.
“ကောင်းသော. အခုတော့ငါသွားလေ. ကျွန်တော်တို့ထဲကတချို့ကတော့အသက်ရှင်သောသတ္တဝါအလုပ်လုပ်, သင်သိလား။” သူကပြုံးပြ, ကျီစားမှု. “နောက်တာပါ!” ထို့နောက်သူသည်မိမိလက်ကိုအတူသူမ၏လက်ဖျံတို့ထိ. “မနက်ဖြန်တွေ့မယ်, မှန်သော? trombones တစ်ဦးတညဉ့်။”
သူမသည်သူ့ကိုတို့ထိခဲ့ပွဲချင်းပြီးထိမိ, နှင့်ဟုဆိုသ, “အင်း။” သူမသည်နေ့စွဲ-o-moron ဖြစ်လာခဲ့သည်, နေ့စွဲ-a-phobe, ရက်စွဲကိုစိန်ခေါ်. သူမသည်လူသားတို့အားလူသိများအမြင့်ဆုံးအုတ်မြစ်အပေါ်ကိုဒံယေလနှင့်အတူအရက်စွဲသွင်းခဲ့, ဧဝရက်တောင်ကဲ့သို့ပမာဏမြင့်မား, ဒါကြောင့်ထိုအရပ်၌ပါးလွှာသောလေထုကိုတက်အတွက်အသက်ရှုရန်ခက်ခဲ. သူကတောင်အသက်အန္တရာယ်ကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါတယ်. တစ်ဦးမဆင်မခြင်ခြေလှမ်းနှင့်သင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲကျရှာနိုင်. ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌နှင့် / သို့မဟုတ်သင့်အသေသတ်.
ထိုအခါကိုယ်တော်သည်စစ်နိုင်နှင့်အတူရန်ကုန်မြို့လယ်လှည့ ်. ပြေးဖို့စတင်မျက်မှောက်အလျင်အမြန်ထွက်ခဲ့သည်. သို့သော် Nina လှည့်ရန်လုံလောက်သောအချိန်ရှိခဲ့, နဲ့သူ့ဘောင်းဘီတိုတွင်မိမိခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းရွှေ့ watch, သူ့ရဲ့ကြွက်သားခြေထောက်များနှင့်ပခုံးနှင့်အတူ, နှင့်တမှုတ် ယူ. ထွက်သွားကြကုန်အံ့, သူမ၏မျက်စိကိုပိတ်, သူ့ကိုသူမကိုင်ထားနဲ့သူမရဲ့နဲ့ N နမ်းကိုမြင်လျှင်
သို့သော်သူမ၏ဖြူ doggie တပ်ရင်းအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အစွမ်းသတ္တိနှင့်အတူအသိစိတ်မှသူမ၏ကျောဆွဲ, သူတို့ကအိမ်မှာသူတို့လမ်းပေါ်မှာနေကြ၏.
သူသည်လေကိုလိုပြေး, ယေရှုသည်ယခုပင်သူ့ရဲ့ငါးမိုင်လောက်မ run ဘူးလျှင်အဖြစ်. သူကအမြင့်ဆုံးခံစားခဲ့ရ, သူခဲကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသိသော်လည်း, သူ partook ကတည်းကကောလိပ်ကျောင်းတွင်ခဲ့. ထိုအခါကိုယ်တော်သည်စိတ်လှုပ်ရှားခံစားခဲ့ရ, သူခဲကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသိသော်လည်း, သူကသူကိုယ်တိုင်ခံစားကြကုန်အံ့ကတည်းကဤမျှကာလပတ်လုံးခဲ့. ထိုမိန်းမငယ်သည်ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးပျက်သောမိန်းမင်, Billy စဉ်းစားခဲ့. သို့သော်ခမ်းနား, ထိုအရပ်၌ရှိသောသူတို့အားဖြူခွေးနှင့်အတူ. သူမနှင့် ပတ်သက်. အရာတစ်ခုခု, ခိုင်ခံ့သောလက်ကို, သူမ၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်စိကို, သူမ၏အပေါ်နှုတ်တော်ထွက်အ, မမျှော်လင့်ဘဲအားနည်းချက်, ပွင့်လင်း, တစ်ခုခုသူ့ကိုထုတ်ခေါက်. ကောင်လေးက Oh, ဒီဖြစ်ပျက်မခံခဲ့ရ, ကဖြစ်? မညာယခု, မဒံယေလအဖြစ်, မတွမ် Peeping သဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သောထို nutty မိန်းကလေးတစ်ဦးအခွန် evader နှင့်အတူ, Boot တက်မှ. သူသည်ဖြစ်စေသူနှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျရောက်သို့မဟုတ်သူမ၏ဖမ်းရှိသည်သွားသို့မဟုတ်နှစ်ခုစလုံးခဲ့သည်. ထိုအhappenedótheနောက်ဆုံးအချိန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အရာကျ, ထိုthingóitအားလုံးအလွန်ဆိုးရွားစွာအဆုံးသတ်ဖမ်းမ. ထိုမိမိကိုယ်ကိုကဲ့သို့ဖြစ်၏. သူမစိတ်ဓါတ်တွေရလာစေတယ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်း, ထိုသို့ဝေးရရှိသွားတဲ့လျှင်, သူသည်ထိုတကယ်ဖြစ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတကယ်မ. ရှေ့နေတစ်ဦးလုံလောက်မကောင်း. သို့သော်တစ်ဦး IRS ကိုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်? အတွေ့အကြုံကနေသူကိုကြိုတင်သိရှိခြင်းသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးအားထုံးစံအရနိုင်သောအရာတစုံတခုကြောင်းကိုသိ, ဒါပေမယ့်ကအံ့အားသင့်လျှက်သူမကျော်ရဘယ်တော့မှတစ်ခုခုဖြစ်.
သူသည်ဒံယေလင်ထင်သည်လို့ဒီတစ်ခါလည်းသူမသူနှင့်အတူထွက်ခဲ့သည်! သူလည်းအံ့ဩ. ထိုဓါတ်ပုံအတွက်ဒံယေလ, ထို slick တိုက်ခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူ, ပြီးပြည့်စုံသောခွေးကို?
အဘယ်သို့သူမဒံယေလရှေ့နေတစ်ခဲ့သည်ကိုသိခဲ့ပါ, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်? ဒီတစ်ခါလည်း bigmouth doorman Pete သူမ၏ပြောသည်ကြောင်း. သို့မဟုတ်အခြားသူမသွားပေးပြီဖြစ်မယ်သောတိုက်ခန်းတွင်မိမိအအစီရင်ခံစာများသို့မဟုတ် mail များသို့မဟုတ်အမှုအရာအတော်များများကိုအချို့ကိုဖတ်ခဲ့သော. ကောင်းသောအရာတစုံတခုကိုမိမိအမှန်တကယ်အလုပ်အကိုင်နဲ့ identity ပုန်းဖို့ဒါကြောင့်သတိထားခဲ့သည်. သူမသည်ဗီအတွက်ခဲ့. သူမသည် trombone ကိစ္စတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်. မိန်းမသည်သူ၏အာဘော်သို့လွင့်ခဲ့. မိန်းမသည်သူ၏စည်ပိုင်းတွင်ရေချိုးခဲ့တော့သည်ခဲ့. အဘယ်သူသည်ဤ Nina နိုင်စွမ်းခဲ့သည်ကိုသိလျှင်,? သူမကိုမကန့်သတ်ခဲ့?
ထိုအချိန်ကာလအားဖြင့် Nina ခွေးလိုက်ပြီးတော့အိမ်မှာသူတို့ကိုဆည်းပူးခဲ့, ခြေရင်းခုနစ်ခုမတူညီတဲ့နေရာတွေကနေသွေးထွက်ခဲ့ကြ. ညာဘက်ခြေမသုံး, လက်ဝဲဘက်လေးခု. သူမသည်သူမ၏အိပ်ရာ၏အစွန်းပေါ်မှာထိုင်, သူမအဘယ်အရာနည်းတစ်ခုကဒီကောင်တွေစဉ်းစား, ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့်တီးဝိုင်းအကူအညီအထောက်အပံ့များကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းနေစဉ်, ဆမ် dutifully သူမ၏ခြေကိုအောက်ခြေလျက်သောအဖြစ်. အင်းဒံယေလheróyou'dဟယ်လင် Keller သူကိုရေချိုးအကြောင်းသိထားtoóbutမဖြစ်ဖို့ရှိသည်သတိထားမိခဲ့. သူက trombone အကြောင်းသိထား.
ဒါပေမဲ့သူကတကယ်တော့သူ့ကိုထုတ်တောင်းဆိုခဲ့ပြီး. ထိုမိန်းမငယ်သည်ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်လုပ်ခဲ့. အခုတော့မှုတ်ပါဘူး, သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိပါကြသတည်းလျှင်သူမပြင်းထန်စွာကပြောပါတယ်, ရက်စွဲကိုရည်ညွှန်း, မဟုတ် trombone.
သူမသည်အတွက်နက်ရှိုင်းတဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်ကိုယူ, ၎င်း၏ musky ရနံ့နဲ့သူ့ရဲ့ဗီအတွက်ကြောင့် t-shirt ဟာပြန်အမှတ်ရရန်ကြိုးစားနေ.
ထိပ်တန်း5ချစ်သူများယင်းတောက်ရုပ်ရှင်များ